Rita, Writing for My Sake!: ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (၈)
Posted by Rita at 8/03/2010 11:14:00 AM
အပိုဒ် ၄၀၂ (ဃ)။ ။ မန္တလေး ပထမမြို့နန်းတည် မင်းတရားသည် ရတနာသုံးပါးနှင့် စပ်၍ အရပ်ရပ်အလှူအတွက် ကုန်ငွေ ၂၆ နှစ် သံဝစ္ဆရချုပ်သည့်အခါ ၂၂ ကုဋေ ၆ သန်းကျော်ကုန်သည်။ ထိုကဲ့သို့ လှူဒါန်းခြင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ငွေကို လှူဒါန်းလျှင် ကုသိုလ်ရသည်။ နိုင်ငံစောင့်ရှောက်ရန်ငွေကို လှူဒါန်းသုံးစွဲပြစ်လျှင် ခိုးခြင်း ၂၅ ပါးတွင် ပါဝင်သည်။ လိမ်လည်၍ ယူခြင်း၊ နှိပ်စက်၍ယူခြင်း အမှုကို ပြုရာရောက်
Same as my policy.
But I've never written.